မြရွက်ဝေ: "ဝါတာရှိ နို ကိ"
Posted by မြရွက်ဝေ at 12:01 PM
အမလည်း ပန်းတွေကို ချစ်တယ်။ အိမ်မှာတော့ မစိုက်ထားဘူး.. ပျင်းလို့.. :P အခု အမတို့ အိမ်နားမှာလေ ဇီဇ၀ါပန်းတွေ ပွင့်နေတာ ခူးချင်လိုက်တာမှ အရမ်းပဲ လက်ကို ယားနေတာပဲ.. အဟီး.. နောက်ပြီး နှင်းဆီပန်းတွေ ပွင့်နေရင်လည်း ခြံစည်းရိုးမှာ အဆုပ်လိုက်ပွင့်တာနော်.. အရမ်းခူးချင်တာပဲ.. (ဘုရားပန်းကပ်ချင်လို့ပါ.. :D) ။ အေးလို့တူပါရဲ့ နှင်းဆီပန်းတွေဆို အရိုးတံက သန်ပြီး အပွင့်ကြီးတယ်နော်.. ညီမလေး ဓာတ်ပုံထဲက ဟာနရှောဘုတော့ အမ မမြင်ဘူးသေးဘူး။ ပန်းပုံလေးတွေတော့ ချစ်လို့ယူသွားပြီ။ အိမ်ထဲက ပန်းအိုးကိုလည်း သတိထားနော်.. တီကောင်ထွက်လာလိမ့်မယ်.. :D ဒီလိုလေး ထွက်လာမှာ.. ~~~~~~~~~~ :D
ညီမက အိမ်ကြီးရှင်ရှိနေတာပဲ ကိုယ်ရံတော်တွေ မဇနိ မသွားမယ်။ ပန်းပင်တွေ သိပ်လှတယ်။ စိုက်အုံးမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်။ :P
သိတ်လှတာဘဲ ညီမရယ်. I steal your photos . so nice
とっても良い　post でした。。
時間をちゃんと作って。。沢山のpost　を書いた　မြရွက် に　感謝してるよん。。
今の気持ちを大切にして　。。もっと。。もっと　書いてね。。
今日も　元気で　楽しく　なります様に。。。ပေါ့နော်
ပန်းကို အကြိုက်ကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ပန်းလေးတွေ မြင်ရင် စိတ်ထဲအလိုလိုကြည်နူသွားသလိုပဲ ပန်းလေးတွေက ချစ်စရာမိန်းမပျိုလေးတွေလေ ယောက်ျားသားတွေကိုလည်း အတော်ဖမ်းစားနိုင်တယ်ဗျ ( ကြော်ငြာဝင်တာ :D)
နားရွက်ထောင်ပြီးနားစွင့် စပ်စု နေတဲ့ ကိုယ်ရံတော် က ဒေါ်မို့လေး ဖြစ်မယ် ။ ဟို ဦးထုပ်ကြီး နဲ့ မိန့်မိန့်ကြီး ထိုင်နေတာကတော့ မာ့ခ် ဖြစ်မယ် ..ဟင်း ဟင်း ..
ပန်းတွေ လာကြည့်သွားတယ် မဝေရေ..
ခရီးထွက်နေတာ.. တစ်နေ့ကမှ ပြန်ရောက်ပြီး ပင်ပန်းနေတာနဲ့ ..
အပြင်ထွက်ပြီး ပန်းကြည့်ရတာလဲ သူများစိုက်ထားတာကို ကိုယ်က ပုံလှမ်းရိုက်ရတာ တစ်မျိုး အရသာပဲ .. =) =) ..
မီဆို ပျင်းလို့ သူများစိုက်ထားတာပဲ လိုက်လိုက်ကြည့်နေတာ..
hee..wait naw..i will send parcel from SG..
here the flowers are cheap..:P